प्रधानमन्त्री ओली हटाउनेबारे सोच्नुपनि अपराध हो, पाप लाग्छ : राज्यमन्त्री दुगड - Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | १४ असार २०७७, आईतवार २१:१९ |
काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिराज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नु वा हटाउनेबारे सोच्नुपनि अपराध हुने र पाप लाग्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै राज्यमन्त्री दुगडले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको हितमा एउटा संकल्प र अठोटका साथ काम गरिरहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीको विकल्प सोच्नु वा हटाउनेबारे सोच्नु दोष हो, यो अपराध हो । पाप लाग्छ ।’ उनले सरकारको विरोध गर्ने वा आलोचना गर्नेहरुले जे कुरामा पनि आलोचना गर्ने गरेको टिप्पणी गरे ।
मन्त्री दुगडले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बदल्ने काम गर्न नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बदल्ने काम दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री हट्दैमा देश बन्छ भनेर कसले ग्यारेन्टी लिन्छ ?’ उनले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प नभएको जिकिर गरे ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीमा देश बनाउने संकल्प रहेको र सोहीअनुसार आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिररहेको पनि उनको भनाई छ । नेपालले संसदबाट नयाँ नक्सा पारित गरेपछि भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध टुटाउनेबारे भ्रामक कुरा बाहिर आएकोप्रति उनले टिप्पणी गर्दै उनले सानो–सानो कुराले दुई देशबीचको सम्बन्ध नटुट्ने बताए ।
उनले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न वार्ता हुने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘निश्चय नै भारतसँग वार्ता हुन्छ । वार्ताको विकल्प छैन् । अहिले पनि केही स्तरमा वार्ता भैराखेको छ ।। उच्चतम स्तरमा, प्रधानमन्त्रीको तहबाटै वार्ता हुनुपर्छ ।’ नेपाल कहिल्यैपनि कसैको अधिनमा नबसेको र सधैं स्वतन्त्र, अखण्ड र स्वाधिन देश भएको उल्लेख गर्दै आफूहरु कसैसँगपनि दबिएर नबस्ने उनले विश्वास दिलाए ।
जनतामा असन्तुष्टि पैदा हुनु स्वभावि रहेको भन्दै उनले सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट सकेको काम गरिरहेको सुनाए । उनले सरकारको कामबाट के उद्योगी तथा व्यवसायीहरु खुशी छैनन् त ? भन्दै उल्टै प्रश्न गरे । सरकारले कोरोना महामारीको संकटको बावजुद बजेटपनि सन्तोषजनक ल्याएको उनले दाबी गरे ।
राज्यमान्त्री दुगडले बजेटमा विद्युतीय गाडीमा करको दायरा बढाएको विषय र चकलेटको विषयमा यो समसामियक भएन कि भनेर पनि गुनासो आएको उल्लेख गर्दै विद्युतीय गाडीको सवालमा विलाषीका गाडीमा मात्रै ट्याक्स बढाईएको स्पष्ट पारे । तर, यसमा पनि सरकारले संशोधन गर्नसक्ने उनले विश्वास दिलाए । नेपालमा विद्युत बढि हुने र बढि भएको बिजुली भारत, बंगलादेशलाई बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाउँदै यस्तो अवस्थामा नेपालले विद्युत खपतलाई बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘विद्युतीय सवारीमा लगाईएको कर संशोधन गर्न सकिन्छ । यो बजेट त यही आर्थिक वर्षको लागि हो नि, अर्को वर्ष पनि बजेट आउँछ । त्यतिवेलापनि एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ । कहाँ–कहाँ कमिकमजोरी छ, त्यो सरकारले सच्याउँछ ।’ उनले भने, ‘त्यसको लागि हामी अहिले छलफल र सरसल्लाह गरिरहेका छौं । सरकार रिजिड छैन् ।’ यसबारेमा आफूले पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अर्थसचिवसँग छलफल तथा कुराकानी गरिराखेको दुगडले जनाए ।
एमसीसीजस्तो परियोजना नेपालको समृद्धिको लागि आवश्यक रहेको भन्दै उनले आवश्यक छलफलपश्चात केही कुरा संशोधन गरेर भएपनि पारित गरिने बताए ।
Previousसीमामा सशस्त्रको उपस्थिति बढाइँदै
Nextक्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका भान्सेको रिपोर्ट नआउँदै दाहसंस्कार
३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार १२:३४
लोहनीको एराप्रपा (राष्ट्रवादी)मा पदाधिकारी मनोनयन
८ जेष्ठ २०७४, सोमबार ११:४३
क्रियाशील सदस्यता किन हटाउँदैछ कांग्रेसले ? यस्तो छ कारण
१३ कार्तिक २०७५, मंगलवार ०७:५५